बेयर मेटल सर्भरहरू के हुन्? प्रकार र प्रयोगहरू। | क्रिएटिव अनलाइन
बेयर मेटल सर्भरहरू के हुन्?
pochoky | 19/02/2021 14:57 | वेब डिजाइन
तपाईंले पक्कै पनि युरोपियन GAIA-X परियोजनाको बारेमा सुन्नुभयो। र यो यो हो कि यस्तो वैश्विक संसारमा, जहाँ तपाईंको डाटा भण्डार गरिएको छ र यूरोपियन डाटा संरक्षण कानूनको सम्मान आवश्यक छ।
थप रूपमा, हामी जसलाई क्लाउड भन्छौं अमूर्त कुरा हैन, यो भौतिक हो, र यो ठूलो डाटा केन्द्रहरूमा फेला पर्दछ। तसर्थ, यदि तपाईं ती मध्ये एक हुनुहुन्छ तिनीहरूले गोपनीयता मुद्दाहरूको ख्याल राख्दछन् र जहाँ तपाईंको सबै डाटा बस्दछ व्यक्तिगत वा व्यवसाय, तपाईले सेवा प्रदायकको छनौट गर्न अझ राम्ररी निगरानी गर्नुपर्छ।
1 बेयर-मेटल सर्भर के हो?
2 कसरी समर्पित सर्भर छनौट गर्ने?
3 सुविधाहरू र प्रयोगहरू
बेयर-मेटल सर्भर के हो?
को बेयर-मेटल सर्भरहरूवा समर्पित सर्भरहरूयो सेवाको एक प्रकार हो जुन तपाईंलाई समर्पित हार्डवेयरको साथ प्रदान गर्दछ, धेरै ग्राहकहरूको लागि साझा सर्भर प्रयोगको सट्टा र VPS (भर्चुअल प्राइभेट सर्भर) को प्रयोग गरेर फ्र्याक्ड गरिएको। त्यसकारण यसका केहि फाइदाहरू छन्, जस्तो:
VPS को तुलनामा उच्च-अन्त (उच्च-अन्त) मा सस्तो, तपाईंको पैसा बचत गर्ने।
प्लस खोज्नेहरूका लागि हाइपरवाइजर तह नभएको वा साझेदारी हार्डवेयर संसाधनहरू नभएको प्रदर्शन।
उच्च समर्पित ब्यान्डविथ, त्यसैले यो राम्रो छ ती ग्राहकहरूको लागि जोलाई अधिक ट्राफिक चाहिन्छ।
दुई अघिल्लो पोइन्ट्सबाट निकालिएको तपाईंसँग छिटो TTFB (समय देखि पहिलो बाइट) हुनेछ।
उत्तम लचिलोपन र स्वायत्तता, पूर्ण नियन्त्रण संग।
ग्रेटर एकता र स्थिरता जब समर्पित भइरहेको छ। त्यो हो, यसले कार्य गर्दछ यदि तपाईंसँग आफ्नै डाटा सेन्टर छ, तर उपकरणहरू किन्नु र यसलाई कायम राख्नको ठूलो लागत बिना।
तपाईको सेवा विस्तार गरेर सजिलै मापन हुने स्रोतहरूको सम्भावना।
तसर्थ, समर्पित सर्भर विशेष गरी ती व्यक्तिहरूको लागि उपयुक्त छ जसलाई होस्टिंग वा अन्य प्रकारको क्लाउड सेवा आवश्यक छ र हुनको लागि योजना छ पहुँचको एक ठूलो संख्या। त्यो हो, ती जसका लागि VPS पर्याप्त छैन, जस्तै प्रमुख कम्पनीहरूका केही वेबसाइटहरू, ई-वाणिज्य, धेरै भ्रमणहरू सहित ब्लगहरू, इत्यादि।
कसरी समर्पित सर्भर छनौट गर्ने?
सक्षम हुन एक उपयुक्त समर्पित सर्भर छनौट गर्नुहोस्, तपाइँले केहि मुख्य बुँदाहरू दिमागमा राख्नुपर्दछ:
CPU- यी सर्भरसँग बहु प्रोसेसरहरू छन्। तिनीहरू डाटा प्रसंस्करणको जिम्मेवार हुनेछन्, त्यसकारण, तपाइँले एक मेशीन छनौट गर्नुपर्दछ जुन तपाइँको उद्देश्य अनुसार उपयुक्त प्रदर्शन छ।
राम: यो महत्त्वपूर्ण छ कि तपाईंसँग मुख्य मेमोरीको सभ्य मात्रा छ, किनकि प्रणालीको चपलता पनि यसमा निर्भर गर्दछ। साथै, यसको कम सम्भावित विलम्बता हुनु पर्छ।
भण्डारण: तपाईं पारंपरिक चुम्बकीय हार्ड ड्राइव (HDD), वा ठोस राज्य हार्ड ड्राइभ (SSD) को साथ द्रुत समाधानहरूको साथ समाधानहरू फेला पार्न सक्नुहुनेछ। टेक्नोलोजीको प्रकारको साथसाथै यो पनि महत्त्वपूर्ण छ कि तपाईं आफ्नो लक्ष्यहरूको लागि उपयुक्त क्षमता छनौट गर्नुहोस्। अवश्य पनि, यी प्रकारका समाधानहरूमा तपाईले आफ्नो डेटाको बारेमा चिन्ता लिनु पर्दैन, किनकी तिनीहरूसँग सामान्यतया रिडन्डन्ट सिस्टम (RAID) हुन्छ, त्यसैले यदि डिस्क ड्राइभ असफल भयो भने पनि, यसले तपाईको डेटालाई असर नगरी बदल्न सक्दछ।
अपरेटिङ सिस्टम: यो अर्को मुख्य विन्दु हो, र यद्यपि धेरै समाधानहरूले GNU / लिनक्स अपरेटिंग प्रणालीहरूको लागि छान्छ, जसले उत्तम सुरक्षा, मजबुतता र स्थिरता प्रदान गर्दछ। केहिसँग विन्डोज सर्भर प्रयोग गर्न विकल्प पनि छ, यदि तपाईंलाई कुनै कारणको लागि त्यो विशिष्ट प्रणाली आवश्यक छ भने।
एन्को दे बांडा: अर्को धेरै महत्त्वपूर्ण कारक, किनकि डाटा ट्रान्सफरमा सीमा यो निर्भर गर्दछ। तपाईले समाधान छनौट गर्नु पर्छ जुन भ्भोल्युम तपाईले सर्ने आशा गर्नु भएको भन्दा उत्तम सूट गर्दछ।
GDPR: जस्तो मैले सुरुमा भनेको थिएँ, समर्पित सर्भर छनौट गर्नु राम्रो विकल्प हो यो सुनिश्चित गर्नका लागि कि यसले यूरोपीय डाटा सुरक्षा कानूनको सम्मान गर्दछ।
अरूलाई: तपाई सायद कन्ट्रोल प्यानलको प्रकार, प्रदायक द्वारा प्रस्तुत गरिएको अतिरिक्त सेवाहरू, इत्यादि विश्लेषण गर्न पनि इच्छुक हुनुहुन्छ।
यदि तपाईं अझै यी प्रयोगहरू बारे धेरै स्पष्ट हुनुहुन्न जुन समर्पित सर्भर OVHcloud लाई दिन सकिन्छ, तपाईंले यी जान्नुपर्दछ। सेवाहरू र सम्भावित अनुप्रयोगहरू:
उठेर: यो होस्टिंग वा वेब होस्टिंग, प्रसारण, फाईल सर्भर, वा व्यावसायिक अनुप्रयोगहरूको आवश्यकताहरूको लागि सबै भन्दा सस्तो सेवा हो। उच्च ब्यान्डविथ, उच्च क्षमताहरू, र Intel Xeon प्रोसेसरहरूको साथ।
अग्रिम: विशेष प्रकारको साना कम्पनीहरूका लागि डिजाइन गरिएको सेवा जुन बहुउद्देश्यीय सर्भरहरूमा लगानी गर्न आवश्यक पर्दछ, उच्च प्रदर्शनको साथ, र्यामको ठूलो मात्रा, र असीमित ब्यान्डविथ। उदाहरण को लागी, जो मानिस कर्पोरेट वेबसाइट, ई-वाणिज्य स्टोर, व्यापार अनुप्रयोग (ERP र CRM), भर्चुअलाइजेशन, आदि होस्ट गर्न चाहान्छन्।
भण्डारण: समर्पित सर्भरहरू तपाईलाई चाहिएको सबै भण्डार गर्न, ब्याकअप प्रतिलिपिहरू बनाउनुहोस्, वा वितरित होस्टिंग। ठूलो क्षमताको साथ (504०XNUMXTB सम्म), NVMe SSDs बीच छनौट गर्न सक्ने सम्भावना, सँधै तपाईंको डाटा हुने उच्च उपलब्धता, र उच्च अन्तरक्रियात्मकता।
खेल: OVHcloud बाट यस प्रकारको समर्पित सर्भरको साथ तपाईंसँग आफ्नै भिडियो गेम सर्भर हुनेछ, जुन DDoS आक्रमणबाट र शक्तिशाली AMD Zen2प्रोसेसरको साथ सुरक्षित छ। उदाहरणको लागि, तपाईं Minecraft को लागी सर्भर लागू गर्न सक्नुहुनेछ, वा स्ट्रिमिंग प्लेटफर्महरूमा होस्टको रूपमा।
आधारभूत संरचना: शक्तिशाली प्रोसेसरको साथ समर्पित सर्भरहरूको दायरा जुन टेक्नोलोजी कम्पनीहरू, अनुसन्धान केन्द्रहरू, वा विश्वविद्यालयहरू जहाँ कम्प्युटि capacity क्षमता, भण्डारण र नेटवर्क प्रदर्शन म्यानेजरको लागि तपाईंको आफ्नै पूर्वाधार निर्माण गर्न।
उच्च दायरा- सबै सेवाहरूको सब भन्दा शक्तिशाली कन्फिगरेसन, विशेष प्रयोगका लागि गहन प्रयोग वा गम्भीर वातावरणको लागि आवश्यक संस्थाका लागि डिजाइन। उदाहरण को लागी, संसाधन मांग अनुप्रयोगहरू जस्तै बिग डाटा, मेशिन लर्निंग, आदि।
लेखको पूर्ण मार्ग: अनलाइन रचनात्मक » वेब डिजाइन » बेयर मेटल सर्भरहरू के हुन्?
फोटोशपमा कसरी र in्गहरू उल्टाउने
क्यान्भालाई कसरी प्रयोग गर्ने: कसरी यो जान्नुहोस् र क्यान्भासँग डिजाईन गर्ने